Fiarovana ara-batana sy ara-batana amin'ny gadolinium
Gadolinium dia iray amin'ireo tontolon'ny hazavana ambaran'ny lanthanide . Ireto misy zavatra mahaliana momba ity metaly ity:
Gadolinium dia volafotsy, malleable , metallic ductile misy metaly. Izy io dia manify ary maniry ny manana loko marevaka matevina.
Gadolinium, toy ny tany tsy fahita firy, dia tsy hita amin'ny endriny madio amin'ny natiora. Ny loharano voalohany amin'ny singa dia ny mineral gadolinite. Ao amin'ny tanety hafa tsy fahita firy izy io, toy ny monazite sy bastnasite.
Raha kely ny mari-pahaizana, dia feromagnetika kokoa noho ny vy ny gadolinium.
Gadolinium dia manana tanjona ambony indrindra.
Gadolinium dia magnetocaloric, midika izany fa mihamitombo ny mari-pana rehefa apetraka eo amin'ny saha maitso ary mihena rehefa esorina amin'ny saha.
Lecoq de Boisbaudran nisintona gadolinium avy amin'ny oxide tamin'ny taona 1886. Nantsoiny hoe singa ho an'ny mpahay simia Finlandianina Johan Gadolin, ilay mpikaroka ny singa voalohany tsy fahita firy.
Ny mpahay simia frantsay sy injeniera Felix Trombe no voalohany nanadio gadolinium tamin'ny taona 1935.
Gadolinium dia manana ny fizaran-tseza avo indrindra amin'ny elanelan'ny elanelana.
Gadolinium dia ampiasaina amin'ny tetezana fanaraha-maso nokleary ho an'ny fizika tsikelikely.
Ny singa dia alefa any amin'ny mararin'ny MRI mba hampitombo ny fifanoherana amin'ny sary.
Ny fampiasana gadolinium hafa dia ahitana ny famokarana vy vita amin'ny vy sy chrom, solosaina sy CD, fonosana mikraoba, ary televiziona.
Ny metaly madio dia miorim-paka ao anaty rivotra, fa mandreraka amin'ny rivotra matevina. Mihena tsikelikely ao anaty rano izy io ary mihodina amin'ny asidra lava. Amin'ny haavon-jiro avo lenta dia mihetsika amin'ny oksizenina ny gadolinium.
Gadolinium Properties of Chemical and Physical
Weight atomic: 157.25
Fikarohana: Jean de Marignac 1880 (Soisa)
Configuration Electron: [Xe] 4f 7 5d 1 6s 2
Sokajin-teny anarana: Rare Earth (Lanthanide)
Teny niaviana: nomena ny mineral gadolinite.
Density (g / cc): 7.900
Kintana (K): 1586
Boiling Point (K): 3539
Ny endriny: metaly malefaka, marefo, volombolamena
Radion'ny atomika (pm): 179
Atombohy amin'ny Atomic (cc / mol): 19.9
Covalent Radius (pm): 161
Radion Ionic: 93.8 (+ 3e)
Heziny manokana (@ 20 ° CJ / g mol): 0.230
Famonoana ny hafanana (kJ / mol): 398
Pauling Negativity Number: 1.20
Fiarovana voalohany (kJ / mol): 594.2
Firenena Oxidation: 3
Lattice Constant (Å): 3.640
Loto C / A Ratio: 1.588
Fitsipika momba ny zavatra tsy sarababem-bahoaka Mombamomba ny Wiktionary Fampitandremana Développeurs Affichage mobile Wikimedia Foundation Powered by MediaWiki
Miverena amin'ny tabilao Periodika
Inona ny singa mifototra amin'ny volana ary nahoana izy ireo no misy?
Inona ny singa elektronika mahomby indrindra?
Lisitry ny radioactive Elements
10 Ohatra amin'ny elanelana sy ny mari-pamantarana misy azy ireo
10 Zavatra mahaliana momba ny volamena
Ny endriky ny Sulphur
10 Zinc Facts
Lisitry ny singa voajanahary
Ny lakolosy mahavaky ny WW1: Theory and Practice
20 kintana malaza indrindra ao amin'ny 'The Simpsons'
Andron'ny fifidianana: Nahoana isika no mifidy rehefa mifidy
Inona no atao hoe smog?
Ny tononkalon'ny tanàna
Nahoana no Navoakan'i Lincoln Fanambarana Habeas Corpus?
Aiza no ahitana ny fitantanana ny kaonty maimaim-poana amin'ny Internet
20 Fitiavana Album Cover
Fihetseham-po dimy momba an'i Afrika
Asa 2 ny antony tokony hahamendrika
Ady Lehibe I: Battle of Amiens
Fianarana momba ny natiora ho an'ny Lohataona
Fomba tsotra kokoa hialana amin'ny dobo filomanosana
Ny History of American Bandstand
Ski Alpine Ski Racing
Ireo mpandresy talohan'ny taona 1970-Ankehitriny
Jihadi na Jihadista
Nahoana no miasa ny kafe?
10 Angano momba ny fanimbana Dinosaur
Mianara momba ireo filozofa stoika
Dean Koontz lisitra boky